ရသေ့တောင်မှာ အေအေနဲ့ဆက်စပ် သံသယနဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဖမ်းဆီးခံရပြန်
ရသေ့တောင်မှာ အေအေနဲ့ဆက်စပ် သံသယနဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွ...
7 ธ.ค. 2562 - 16:51 น.
အေအေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ အရပ်သား ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေ မြင့်တက်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသက ရသေ့တောင်မြို့နယ် တောင်ပိုင်း အငူမော်ကုန်တန်းကျေးရွာမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျောင်းဆရာ တစ်ဦးနဲ့ ကျောင်းစာရေးတစ်ဦးတို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုက ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေနဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပညာရေးဌာနက ပြောပါတယ်။
"၃ ရက်နေ့က ဖမ်းသွားတာ၊ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရဘူး၊ ဘာအကြောင်းလဲတော့ မသိဘူး၊ ဒီအတိုင်းခေါ်သွားတာပဲ၊ အိမ်ကနေပဲ ခေါ်သွားတာ" လို့ ဖမ်းဆီးခံရသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အလယ်တန်းပြဆရာ ဦးကျော်ဆန်းနိုင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဖမ်းခံရပြီး ၃ ရက် ကြာတဲ့အထိ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရသေးလို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ တစ်နှစ်သားကလေးနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့သူ ဇနီးသည်က ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နေ့လယ်ပိုင်းမှာ အငူမော်ကုန်တန်းကျောင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ စာသင်ပြနေတဲ့အချိန် ကျေးရွာအတွင်းကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုက သေနတ်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူတွေအကုန်လုံးကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို လာရမယ်ဆိုပြီးတော့ ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
စာပြနေတဲ့ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေပါ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သွားရောက် စစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ အလယ်တန်းပြဆရာ ဦးကျော်ဆန်းနိုင် (၃၄ နှစ်) နဲ့ ကျောင်းစာရေး ဦးနေဇော်ထွန်း (၂၈ နှစ်) တို့ကို အေအေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုပြီး ညနေပိုင်းမှာ တပ်မတော်က ခေါ်ယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာနဲ့ ကျောင်းစာရေးတို့ကို အငူမော်စခန်းကနေ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေပိုင်းမှာ မောင်တောမြို့နယ် အင်းဒင်နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကို ပို့ဆောင် ခဲ့ပြီး၊ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ မောင်တောနယ်မြေရဲစခန်းကို ထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ သိရကြောင်း မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
ပညာရေး ဌာနဘက်ကလည်း သူ့ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေ
အဲ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ပညာရေးဌာနကို အကြောင်းကြား တာမရှိခဲ့သလို အခုအချိန်ထိလည်း တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းမကြားသေးဘူးလို့ ရသေ့တောင် မြို့နယ် ပညာရေးမှူး ဦးကျော်မြက ပြောပါတယ်။
"ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး၊ ကျွန်တော်သတင်းကြားလို့ ဖုန်းခေါ်တယ်၊ ကျွန်တော် ရသေ့တောင် မြို့နယ် ပညာရေးမှူးပါ၊ ဆရာတို့အဖွဲ့က ပညာရေးဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်ကို ခေါ်သွားတယ်လို့သိရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ် လို့မေးတဲ့အချိန်မှာ မဖြေဘူးဗျ၊ မအားသေးဘူးဆိုပြီးတော့ ဖုန်းချပစ်တယ်၊ နောက်မေးရင်လည်း မဖြေတော့ဘူးဗျ၊ သူတို့လည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ပညာရေး ဝန်ထမ်းဆိုတော့ ဝန်ထမ်းချင်းအတူတူပဲလေ၊ တစ်ခုကိုတစ်ခု အသိပေးရမှာပေါ့လေ၊ အခုတော့ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေက မလုံခြုံသလို ခံစားရတယ်" လို့ မြို့နယ် ပညာရေးမှူး ဦးကျော်မြက ပြောပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးတဲ့နေ့က အငူမော်စခန်းမှာထားခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒီမှာမလုံခြုံတဲ့အတွက် အင်းဒင် စခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး လိုက်လံစုံစမ်းတဲ့အခါမှာ အင်းဒင်ကနေ မောင်တောနယ် မြေရဲစခန်းကို ထပ်မံပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိကြောင်း ပညာရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
ကျောင်းဆရာနဲ့ ကျောင်းစာရေးကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ပညာရေး ဝန်ထမ်းတွေလည်း ကျောင်းမတက်ရဲကြတော့တဲ့အတွက် လက်ရှိမှာ အငူမော်ကုန်တန်းကျောင်းကို ယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသူနှစ်ဦးမှာ အလယ်တန်းပြဆရာ ဦးကျော်ဆန်းနိုင်က အငူမော်ကုန်တန်းရွာခံဖြစ်ပြီး ကျောင်းစာရေး ဦးနေဇော်ထွန်းမှာ ရသေ့တောင်မြို့ နယ် မြောက်ဘက် ကျောက်တန်းနယ်မြေ၊ ပြိန်းတောကုန်တန်းကျေးရွာသားဖြစ်ကာ အငူမော်ကုန်တန်းကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းမှာ တာဝန်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီး ပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးနဲ့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း ဘီဘီစီက အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။
ဖမ်းခံရသူတွေက အေအေနဲ့ ဆက်စပ်သူတွေ မဟုတ်လို့ မိသားစုဘက်က ပြော
သူတို့နှစ်ဦးကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမယ့် တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ရှိတဲ့နေရာတွေကို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံမှု မပြုလုပ်ရဲကြသလို ပညာရေးဌာနကို အကြောင်းကြားထားပေမယ့် ဌာနအနေနဲ့လည်း စစ်ကြောင်းနဲ့ တွေ့ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ ဦးနေဇော်ထွန်းရဲ့ ယောက်ဖဖြစ်သူ ဦးသန်းဝင်းကပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ သူတို့နှစ်ဦးကို ရသေ့တောင်နယ်ကနေ မောင်တောမြို့နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့တဲ့အတွက် မိသားစုတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပြီး ဦးနေဇော်ထွန်းမှာ အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်သူ ပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အေအေနဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ မိသားစုတွေက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စမှာ အခုလိုမျိုး အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဘူးလို့ မိသားစုတွေကပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ကလည်း အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူး၊ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ အေအေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မရှိဘူး၊ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ အေအေနဲ့ဖြစ်ကြတာကို အေအေနဲ့ တပ်မတော်ပဲ သွားတိုက်ပေါ့၊ အပြစ်မရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ပြည်သူတွေကို ဘာမှမလုပ် စေချင်ဘူး ပေါ့။ အခုက ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ စာလည်းပြလို့ မရတော့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့" လို့ ဦးသန်းဝင်းကပြောပါတယ်။
သူတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျေးရွာလူကြီးတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က အငူမော်စခန်းကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့် စစ်ဆေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီး မောင်တောမြို့နယ်ကို ထပ်မံ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုတွေကပြောပါတယ်။
ရခိုင် ပညာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ဖမ်းဆီး ခံရမှု အခြေအနေ
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကလည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် နော်ဝေကျေးရွာမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာမတစ်ဦးကို မသင်္ကာလို့ဆိုပြီး ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အတွင်းမှာလည်း ကျောင်းဆရာတချို့ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ကျောက်ရံကျေးရွာက ဆရာတစ်ဦးဟာ စစ်ဘေးရှောင် ကလေးငယ်တွေကို ကျူရှင်ပြပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန် ရွာအပြန်လမ်းမှာ ဖုန်းပြောနေတာကို အေအေနဲ့ ဆက်သွယ်တယ် ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှာ လက်ရှိ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်း မကြာခင်က ဖြစ်ပွားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ အတွင်းက အေအေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်က ကျောင်းဆရာ ၂ ဦး အနက် မူလတန်းပြကျောင်းဆရာ ဦးနေဇော်လင်းကို မှားယွင်းစွာ တရားစွဲဆိုမှု ဆိုပြီး ၄ လ ကြာ ဖမ်းဆီးထားရာကနေ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ကနေ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တရားရုံးက လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ကျန် ၁ ဦးကတော့ အမှု ဆက်ရင်ဆိုင်ရေတဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အဖမ်းဆီးခံရပြီး မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ကျောင်းဆရာတွေသာမက အရပ်သားတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ကျောက်တော် မြို့နယ် မီးဝရွာက ရွာသား ၆ ဦးကို စစ်တပ်က ခေါ်ဆောင်သွားတာ ၂ ပတ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အထိ တိုင်ကြားထားတယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တိုင်ကြားစာနဲ့ အသနားခံစာကော်မတီကို ပို့ဖို့ လိပ်စာတချို့လည်း ပေးထားပြီး မိသားစုအနေနဲ့ အဲဒီကော်မတီကိုလည်း စာပို့ဖို့ ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ကလည်း မြောက်ဦးမြို့နယ် သပြေကန် ကျေးရွာ အနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် မင်းပြားမြို့နယ် ဦးစောတင့်ရပ်ကွက်က ဦးစိန်ဝင်းမောင် (၄၁ နှစ်) နဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ် သပြေကန် ကျေးရွာက အသက် ၆၀ အရွယ် ဦးဆိတ်ဖားချေတို့ကို စစ်တပ်က ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပြီး သူတို့ ၂ ဦးလုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ မိသားစုတွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရသေ့တောင်မှာ အေအေနဲ့ဆက်စပ် သံသယနဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဖမ်းဆီးခံရပြန်